Disposable Chiso Mask, Nonwoven Gown, Pvc Gloves - Xinyuanjiaye
M1013 pvc ruoko goridhe yakakwira mhando yepamusoro pvc disposab ...
CE Vagadziri Vanorasa Zvisina Kurukwa
Zvigadzirwa zvinosanganisira: masiki ekudzivirira anochengetedzwa, maseru ekurapwa anokaraswa, masiki ekupeta (KN95), nezvimwewo, kufukidza hutano hwehutano, chikafu neindasitiri yemakemikari, zvigadzirwa zvemagetsi, indasitiri yemakemikari yakajeka uye zvimwe zviitiko zvine hukama, izvo zvakakunda rumbidzo isingaenzaniswi kubva kuvanhu vane nzwisiso mu indasitiri. Izvo zvigadzirwa zvinogadzirwa zvinoenderana nehunhu hwepamba uye hwenyika, uye zvigadzirwa zvinotumirwa zvinosangana nezvinodiwa zvetifiketi zveEU CE neUS FDA. Seimwe yeiyo mutsva anotungamira mhando mumaski indasitiri, isu tine 100,000-level yakachena nzvimbo uye yepamusoro yekugadzira michina, yakasimba bhizinesi manejimendi, uye tinopa vatengi zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvakagadzikana. Zvigadzirwa zvinotumirwa kuEurope, Africa, Canada, Japan, Southeast Asia nedzimwe nzvimbo
Zvekubvunza nezvezvigadzirwa zvedu kana pricelist, ndapota tisiye isu uye isu tichava tinobata mukati maawa makumi maviri nemana.
Zvizere otomatiki uye hafu-otomatiki kugadzira mutsara
1.5 miriyoni Nissan
Vanoda kusvika zana vashandi
2700 mativi mativi
Bvumirana neEU CE uye US FDA chitupa
Masiki ekudzivirira Ekutengesa Masiki anodzivirira anosanganisira masks ekudzivirira emazuva ese uye masiki ekudzivirira Mazuva ese ekudzivirira The
Masiki ekudzivirira Ekutengesa Masiki ekudzivirira anosanganisira masks ekudzivirira emazuva ese uye masiki ekudzivirira Mazuva ese Masiki ekudzivirira Iro mask remasiki ekudzivirira zuva nezuva rakagadzirwa nemidziyo yemafirita. Masks ekudzivirira kwezuva nezuva anonyanya kukamuraniswa kuva masks eguruva uye anti-virus masks. Masvumbi emarara ane protec ...
KN95 Masks Parizvino, kupfeka masks ekurapa anoonekwa seimwe yenzira dzinoshanda dzekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Nekudaro, kune akawanda marudzi emamaki. Mhando dzakasiyana dzemaski dzinogona kudzivirira iyo COVID-19 zvinobudirira senge KN95. Kana iye mushandi wechiremba uye munhu anowanzo pinda yakakwira-r ...
Shandisazve N95 Mask
Shandisazve N95 Mask Coronavirus inopararira kubva kune mumwe munhu ichienda kune mumwe, kana mumwe munhu akasangana nekuvanzika kwemunhu ane hutachiona. Iko kukanganiswa kwehutachiona kunokanganisa nzira yekuparadzira zvakananga. Kupfeka mask kunogona kukutadzisa kunzvenga hutachiona mumadonhedza zvakananga.Remember w ...